अभिनन्दनका छोरालाई पाकिस्तानी सैनिकको भावुक पत्र - Namasteholland, News, Information and Technology
अभिनन्दनका छोरालाई पाकिस्तानी सैनिकको भावुक पत्र
१७ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ११:५८0395
१७ फागुन, काठमाडाैं । पाकिस्तानको कब्जामा रहेका भारतीय वायूसेनाका विङ कमान्डर अभिनन्दन वर्धमान आज रिहा हुँदैछन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमारान खानलाई उनलाई भारतको जिम्मा लगाउने हिजो घोषणा गरेका थिए ।
यसै सन्दर्भमा अहिले पाकिस्तानी सैनिकको नाममा सार्वजनिक भएको एउटा खुलापत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । पत्र लेख्ने सैनिकको नाम उल्लेख छैन, तर पाकिस्तानी सेनाको आधिकारिक ट्वीटरमा यसलाई सेयर गरिएको छ । अभिनन्दनका छोरालाई सम्वोधन गरेर
लेखिएको पत्र यस्तो छ ः
प्रिय सानो बाबु
बधाई छ, तिमी चाँडै आफ्नो बुवालाई अंगाल्न गइरहेका छौ । हामी तिम्रो बुवालाई एउटा उपहारको रुपमा फिर्ता पठाइरहेका छौं । चाहे उनी तिमी जस्ता थुप्रैमाथि बम खसाल्न आएका किन नहुन् । बाबु सुन । मेरो तिमीलाई एउटा अनुरोध छ । जब उनले तिमीलाई हतारिँदै आफ्नो कसिलो अंगालोमा बाँध्छन्, उनलाई बिनम्रताका साथ मेरो तर्फबाट केही प्रश्नहरु सोध्नु । उनलाई सोध्नु, बुवा ! के मजस्ता काश्मिरी बच्चाहरुलाई खुशीसँग उनीहरुको बुवासित बस्ने अधिकार छैन ? उनलाई सोध्नु, यदि उनीहरुले तपाईंलाई अराजक भीडको बीचमै छोडिदिएको भए के हुन्थ्यो ? उनलाई सोध्नु, युद्ध र घृणाको मूल्य के हुन्छ ? उनलाई सोध्नु, के शक्तिशाली छ घृणा कि माया ? उनलाई सोध्नु, जीवन सुन्दर छ वा मृत्यु ? म तिम्रो उत्तरको प्रतिक्षामा हुनेछु । खुशीसाथ रहनु सानो बाबु, एक दिन तिमी आफ्नो बाबुसहित हामीसित भेट्न आउने कामना गर्छु । तर, त्यतिबेला तिम्रो बाबुको हातमा मिसाइल र बम होइन फूल हुनेछ । अन्त्यमा, म तिमीलाई वचन दिन्छु कि कसैले पनि तिम्रो अनुहारको मुस्कान खोस्न सक्ने छैन र हाम्रो विध्वंसका लागि हाम्रो भूमि प्रयोग हुन दिने छैन । आफ्नो बाबुसँग खुशीसाथ रहनु ।
३४ वर्षीय अभिनन्दन वर्धमान भारतको चेन्नई शहरका हुन् । उनी सन् २००४ मा भारतीय सेनामा भर्ति भएका हुन् । उनका पिता पनि भारतीय वायूसेनामा थिए । अभिनन्दनका छोरा १० वर्षका छन् ।
७ श्रावण २०७६, मंगलवार २२:०९0788
२० जेष्ठ २०७६, सोमबार १०:३१0780
राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भयो चिकित्सा शिक्षा विधेयक
१७ माघ २०७५, बिहीबार ११:२५0405
Hey Buddy!, I found this information for you: "अभिनन्दनका छोरालाई पाकिस्तानी सैनिकको भावुक पत्र". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%85%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%9b%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b8/. Thank you.